အယ်ဒီတာ့လက်ရေး ၂၀ – Maung Yit | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ရစ်၊ မတ် ၆၊ ၂၀၁၃
ကဗျာဆရာမင်းထက်မောင်ရဲ့ ကဗျာပြောင်းပြန် ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေး ရှိတယ်။ ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်း ရေးတာပါ။ အရင်စစ်အစုိုးရလက်ထက်မှာ စာအုပ်မထွက်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ စာအုပ်လေးထွက်လာပြီ။ ပြောင်းပြန်တွေးပြီး ပြောင်းပြန်လုပ်တဲ့ သူတယောက်အကြောင်းရေးထားတာ။ နောင်ကျမှ စာကူးပြန်ရိုက်ပြီး တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။
ဆရာမောင်စွမ်းရည်နဲ့ ဖုံးဆက်ဖြစ်တယ်။ ၈၈မျိုးဆက် ကိုဌေးကြွယ် အမေရိကား အလည်လာမယ်။ ဆရာတို့ နယူးယောက်လည်း လာမယ်။ ကျနော်တို့ ဆန်ဖရန်ဖက်လည်း လှည့်ဝင်မယ်။ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံကြဖို့၊ ကြိုဆိုကြဖို့ အစီအစဉ်တွေအကြောင်း မေးမြန်းမိပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဆရာက ပြောတယ်။ ပြည်ပရောက်တွေက လက်ရှိ (စစ်)အစုိုးရထံကနေ ကြိုတင်ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်၊ ပြည်တော်ပြန်ခွင့် တောင်းဆိုကြဦး မတဲ့၊ ပြင်နေကြတယ် ကြားမိသလား လို့ မေးပါတယ်။ ကျနော်က မကြားမိဘူးလို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ငါ့သဘောကတော့ကွာ … ဒီစစ်အစုိုးရဆီကနေ ငါတို့တွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပါလို့ တစာစာ တောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကွ။ ငါတို့ဆီကနေပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေက သူတို့ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးပါလို့ လာတောင်းရမှာ။ ငဖယ်က ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေပြီ … လို့ ပြောတယ်။
ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့က ကဗျာပြောင်းပြန် ဖြစ်နေပြီပေါ့။ သွားတွေးမိတာ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ စစ်အစုိုးရက အားလုံးခွင့်လွှတ်ပါတယ် ပြန်လာကြပါ လို့ ပြောတာကို တောင်းဆိုနေတာမျိုးထက်၊ ကာယကံရှင် ပြည်ပရောက်တွေ၊ နယ်စပ်ရောက်တွေ၊ အကျဉ်းထောင်ထဲ ရောက်နေသူတွေက မင်းတို့ စစ်အစုိုးရကို ငါတုို့က ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီ။ ငါတို့ ပြန်လာပြီဆိုပြီးတော့ ပြန်ကြရမှာ မဟုတ်ဘူးလား လို့ အတွေးတွေ ဆပွားနေမိတယ်။ ခွင့်လွတ်နိုင်ကြရင် ပြန်ပေါ့ကွာ။ ဟိုက ခွင့်လွှတ်လို့ ပြန်ကြရတယ်ဆိုရင် အတော် အောင့်သက်သက်မနိုင်ဘူးလား။
အဲသည်အတွေးပြောင်းပြန်တွေနဲ့ ဆရာကိုအောင်ဝေးကို ဖုံးဆက်ဖြစ်တယ်။ သူက ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးရှည် ကဗျာနံပါတ် ၆ ရေးပြီး ပို့လိုက်တဲ့ အကြောင်းပြောတယ်။ ဆရာမောင်စွမ်းရည်နဲ့ အလားတူ စကားပြောဖြစ်ခဲ့တာကို ပြောတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီအကြောင်းပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ခင်ဗျား ကာတွန်းရေးပေါ့ဗျာလို့ သူကပြောတယ်။ ကျနော်ကတော့ အယ်ဒီတာ့လက်ရေးထဲပဲ ထည့်ရေးလိုက်တော့မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။
လက်ရှိမှာ အတည့်အတိုင်းဖြစ်နေတာကို ပြောင်းပြန် တွေးကြည့်၊ မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ရတော့မလို ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အတွေးနယ်ချဲ့မိတော့ ဆရာစွမ်း ကန့်ကွက်နေတဲ့ အာဇာနည်ဗိမာန်နေရာကို ကိုရီးယားဗိမာန်ဆောက်မယ့်ကိစ္စဆီ ရောက်သွားပြန်တယ်။ ဒီမြေနေရာက ဘယ်သူပိုင်တာလဲ။ ပြည်ထောင်စုပိုင်လား၊ ရန်ကုန်တိုင်းက ပိုင်တာလား။ ပြည်ထောင်စုပိုင်တာဆိုရင် အစုိုးရက ဆုံးဖြတ်တာလား၊ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်တာလား။ တိုင်းကပိုင်တာဆိုရင်တော့ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဒေသခံလွှတ်တော်နဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ သဘောပေါ့။
ဟိုတလောက ဟံသာဝတီ ကားရောင်းဝယ်စခန်းလည်း အဲသလိုပဲပေါ့။ နိုင်ငံတော်ပိုင်ဆိုပေမယ့် ဒီမြေက ဗဟိုကပိုင်တာလား၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပိုင်တာလား။ စည်ပင်သာယာက ပိုင်တာဆိုရင် တိုင်းအဆင့်မှာ ဒေသခံတွေနဲ့ ရှင်းကြပေတော့။ အင်း … နောက်ပြီးတော့ လက်ပံတောင်းအရေးလိုမျိုး … တွင်းထွက်တွေကို ဘယ်သူပိုင်တာလဲ။ ပြည်ထောင်စု ဗဟိုကပဲ အပိုင်ယူထားတာလား။ သက်ဆိုင်ရာဒေသက ပြည်နယ်က ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလား။ ပြည်နယ်အဆင့် ဒေသခံတွေနဲ့ ဆိုင်တယ် ပိုင်တယ်ဆိုရင် ဗဟိုကနေ အကုန် ချယ်လှယ်ချင်တိုင်း ချယ်လှယ်လို့ မရဘူးပေါ့။ အခု နောက်ပေါက်စစ်အစုိုးရလက်ထက်မှာ ဖြစ်နေတာက သူတို့တွေ အာဏာရှင်ဘ၀တုန်းက အကုန် မောင်ပိုင်စီးပြီး အနုကြမ်းစီးထားခဲ့တာတွေက အခု အရပ်ဝတ်အစိုးရတွေ လွှတ်တော်တွေနဲ့ ရုပ်ပြောင်းပြီးကာမှ အရှုပ်တွေ ပေါ်ကုန်တာ။
အတည့်မတွေးပဲ ပြောင်းပြန်တွေးလိုက်တော့ ဗဟိုကနေ အပေါ်စီးကချည်း ဖိမလုပ်ဘဲ အောက်ကနေ အထက်ကို ပြန်ဆန်ကြည့်လိုက်မိတာတွေက စဉ်းစားစရာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားနဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကို ဘာကြောင့် လက်နက်ကိုင်ပြီး ကန့်သတ်ဖုံးကွယ်ထားချင်နေရတာတုန်း။ ရခုိုင်မှာ ပကတိအခြေအနေတွေကို ထုတ်ဖော်တာ၊ ဆန္ဒကောက်ယူတာတွေ မထုတ်ပြန်ဘဲနဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တွေကို ရခိုင်မှာပဲ အတင်းနေရချမယ်။ တခြားပြည်နယ်တွေ တိုင်းတွေကို နယ်ကျော်မလာကြနဲ့လို့ ပိတ်ပင်နေတာက ဘာသဘောကြီးလဲ။
ဒါက နိုင်ငံသားအရေးဆိုရင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ ရှင်းလို့ မရဘူးလား။ ဒေသခံတွေအရေးဆိုရင်လည်း ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့် ဒေသခံ မဲဆန္ဒရှင်တွေ သဘောပဲပေါ့။ နိုင်ငံသားဟုတ်သူနဲ့ မဟုတ်သူ ခွဲခြားပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တရားမျှတရေး လုပ်ရမယ့်ဟာကို ရခုိုင်၊ မြန်မာ၊ ဘင်ဂါလီ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မွတ်ဆလင် ဆိုပြီး လျောက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေတာက အလုပ်မဖြစ်အောင် တမင်များ လုပ်နေသလား မှတ်တယ်။
ကျနော်တို့တတွေမှာက တရားဥပဒေက အမှန်တရားဖက်မှာ မရှိတာ ကြာပြီဆိုတော့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနဲ့ နေလာရတာ အကျင့်ပါနေပြီ။ အစုိုးရတို့ လွှတ်တော်တို့ စစ်တပ်တို့က ကိုယ့်ဖက်မှာ မရှိဘူးဆိုတာ အကြိမ်ကများနေပြီ။ အခုကိုယ့်ဖက်မှာ ပါနေပြီလို့ စိတ်ဒုံးဒုံး ချချင်ပြန်တော့လည်း ခံထားရတဲ့သူက ဗိုလ်ကျသူဆီကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ သွားတောင်းနေရတယ်။ မင်းတောင်းပန်ရင် ငါကျေအေးမယ်လို့ ပြောတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူး။ ပြောင်းပြန်ပေါ့။
ပြောလက်စနဲ့ ဆက်ပြောရရင် နေ့ခင်းမှာ ဆန်ဖရန်က မိတ်ဆွေ ကိုညီနဲ့ ကိုကျော်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ အင်န်အယ်ဒီပါတီညီလာခံအကြောင်း။ မြန်မာပြည်က တပါတီအာဏာရှင်တွေ၊ ရုရှားဆိုဗီယက်တို့၊ တရုတ်တို့ရဲ့ ဆုိုရှယ်လစ် ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေပဲ စိတ်စွဲနေလို့လားမသိဘူး။ ပါတီဝင်တွေကို လျောက်လွှာတွေနဲ့တောင် ခေါ်ရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်း ပါတီဝင် ဘယ်ရွေ့ ဘယ်မျှ ပြနိုင်မှ ပါတီထောင်ခွင့်ရမယ်၊ ပြီးတော့ စိစစ်ဦးမယ် ဆိုပြန်တယ်။ ပါတီဝင်တွေနဲ့ ပါတီတွေကို ထူထောင် လည်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့ သူတို့ဟာက တပ်မတော်ကြီးက စစ်သားတွေ စုနေသလိုမျိုးနဲ့ တူနေသလိုပဲလို့ တွေးမိတယ်။
အမေရိကားမှာတော့ ပါတီဝင်ပြီး ပါတီကိစ္စ၀င်လုပ်ပေးတာက ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်ပဲ။ သာမန်ပြည်သူတွေကတော့ မဲဆန္ဒရှင်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်ထားလိုက်ရုံနဲ့ အေးပြီပဲ။ မဲဆန္ဒရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်တဲ့ဆီမှာမှ ကိုယ်က NLD အားပေးသူ၊ USDP အားပေးသူဆိုပြီး အကွက်လေးတွေ ရွေး ခြစ်ပေးထားလိုက်ရင် ဒေသခံ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မဲပေးဖို့တို့၊ ကိုယ့်ပါတီအလိုက် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မဲပေးဖို့ ကော်မရှင်တွေက အကြောင်းကြားတယ်။ ကိုယ့်အားပေးတဲ့ ပါတီတွေကလည်း ကိုယ့်ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ အကြောင်းကြားပြီးတော့ မဲဆွယ်တာတွေ၊ စည်းရုံးတာတွေ လုပ်တယ်။ တကယ် ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ ပါတီရုံးခန်းမှာ သူတို့ဆီက တကယ်အလုပ်လုပ်သူတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတော့တာပါပဲ။ ကိုယ့်ရန်ပုံငွေ ကိုယ်ရှာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်စားလှယ်ကို ရွေး၊ မဲဆွယ်၊ အဆင့်ဆင့် ရွေးကောက်ခံနိုင်အောင် ချီတက်ပေတော့ပဲ။
ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်လို့တို့၊ ပါတီဝင်ထားလို့တို့ ၀န်ထမ်းမလုပ်ရဘူးတို့ ဆိုတာတွေက မဆလခေတ်၊ တပါတီအာဏာရှင်ခေတ်က အတွေးအခေါ်တွေပါ။ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ မဲဆန္ဒရှင်တွေချည်းပဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ပါတီ တခုမဟုတ် တခု အားပေးသူတွေချည်းပဲ။ ပါတီတွေက ရွေးကောက်ပွဲအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း သူတို့ စိတ်ပါရင် ပါသလို ၀င်ပြီး မဲပေးကြတာချည်းပဲ။ နောက်ပိုင်းကိစ္စတော့ သူတို့စိတ်မ၀င်စားဘူး။ မြို့နယ်အဆင့်ဆင့် ရွေးသွားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆက်လုပ်ကြပေတော့။ အလုပ်မဖြစ်ရင် နောက်သက်တမ်း သူတို့တွေ မဲမရဘူးပေါ့။
ပြောင်းပြန်တွေးရင်တော့ အရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ ရာသက်ပန်ကိုယ်စားလှယ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ တခါလောက် အရွေးခံလိုက်ရပြီးရင် တသက်လုံးပြန်မဆင်းတော့ဘူး အစွဲအမှတ်ကြီးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနဲ့ အကြီးအကျယ် လုကြ ယက်ကြ ဖြစ်ကုန်ကြတာနဲ့ တူရဲ့။
အတည့်အတုိုင်းကြည့်လိုက်ရင် လူတွေက ကိုယ့်အစွဲနဲ့ကိုယ်ကြီးကြတယ်။ အဲသည်အစွဲအတွက် အခြားမတူနဲ့ သူတွေကို တိုက်ခိုက်တယ်။ ဆန့်ကျင်ဝေဖန် ရှုတ်ချတယ်။ ဒေါ်စုကုို ကြိုက်တဲ့သူကလည်း ဒေါ်စုအကြောင်း မကောင်းပြောတဲ့ အုပ်စုတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပဲ။ ပြောင်းပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့ ဒေါ်စု ကြိုက်တဲ့သူကလည်း သူ့အခွင့်အရေးပဲ၊ ဒေါ်စု မကြိုက်တဲ့သူကလည်း သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲ။ နောက်ဆုံး ဆန္ဒမဲ အနည်းအများ ဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့မှာပဲ အဖြေပေါ်မှာပေါ့။ အဲဒါမှမဟုတ်ဘဲ အကြိမ်အများဆုံး ရန်ပွဲတွေ အငြင်းအခုန်ပွဲတွေနဲ့ပဲ အဆုံးအဖြတ်ခံနေကြတာကတော့ အလုပ်မဟုတ်သေးဘူး။ အဲသလို အငြင်းအခုန်တွေ မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ကွဲပြားခြားနားနေကြတာနဲ့ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ အနှစ် ၂၀ ကျော်တုန်းက တပ်မတော်က မင်းတို့တွေ မင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်လွန်းလို့ တိုင်းပြည်အာဏာကို ငါတို့ပဲ သိမ်းလိုက်ပြီ ဆိုပြီး မဲနဲ့ အရှုံးအနိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရဘဲ လက်နက်သာတဲ့သူရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခွင့်ကို ကျနော်တို့ ပေးအပ်ခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား။
အခုဒီတခေါက်မှာလည်း လက်နက်ကိုင်ပြီး အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားချင်သူတွေကို ကျနော်တို့က အတည့်တွေးပြီး အကုန်လုံး လက်ဝေခံလုပ်၊ လက်ဖြန့်တောင်းနေတာချည်းနဲ့ ပြီးနေလို့ မဖြစ်ဘူး ထင်တာပဲ။ ကျနော်တို့က ပြောင်းပြန်တွေးပြီးတော့ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ တွေးမိတယ်။ သူတို့ကို ကျနော်တို့က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီး စစ်တန်းလျားပြန်ပို့မှ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တာပဲ။
Tags: ကချင်, ဆန်ဖရန်, ရခိုင်, ရခုိုင်
Maung Yit – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန်က ကြိုဆိုပါသည်၊ (4)
>SF Bay Burmese host Fund Raising for Giri Cyclone Victims (0)
>SF Bay Burmese Democraic Forces invite to host ceremony for 88 -23 Years Event (0)
One Response to အယ်ဒီတာ့လက်ရေး ၂၀ – Maung Yit
မောင်ပျာလောင် on March 8, 2013 at 3:52 am
မောင်ရစ် ပြောတဲ့ ပြောင်းပြန်တွေးတာတွေ ကို မောင်ပျာလောင် သိတ်ကြိုက်တယ်၊ သိတ်သဘောကြပြီးတစ်ယောက်ထဲ ပီတိဖြစ်ပြုံးနေတာကြောင့် ဘီသုံးလုံး (ဘေးထိုင် ဘိုင်ကြ ဘုပြော) ၀ိုင်းတော်သားတွေက ဟဲ့ ဟဲ့ ပိတ္တာတို့ ပြုံးတယ် သတိထားဆိုပြီး သတိပေးခေါင်းလောင်းတီးလိုက်ထာနဲ့ ၊ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ မောင်ရစ် ရဲ့ ပြောင်းပြန်တွေးတဲ့ သီအိုရီကို ကျနော်ကြိုက်လွန်းလို့ ပြုံးမိတာပါလို့ ပြောလိုက်တော့။ အော်ဒါလား – အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒို့ တတွေ အဲဒီ့ သီအိုရီ သုံးလာတာ ဆယ်ဆုနှစ်များမကကြာပါပြီတဲ့။ ဆိုစမ်းပါဦး ပညာယှီကြီးတို့ ရယ်လို့ ဆိုတော့ – – – ။ ဒီလိုကွ၊ တချိန်တုံးက အမေစုကို နိုင်ငံခြားငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၀ လက်ဝယ်ကိုင်ထားမှု့ နဲ့ န၀တ အစိုးရကြီးက တရားဆွဲမယ်လုပ်တော့၊ ဒို့ တတွေ ပြောင်းပြန်တွေးကြည့်တယ်၊ စစ်ဗိုလ်ကြီးကြီး၊ အလယ်အလပ်၊ အငယ်တွေ၊ ပေါက်စတွေ လက်ထဲမှာ ဒေါ်လာတွေ ကိုင်ထားတာမရှိဘူးလား လို့ တွေးကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီ့အမှု့ ကြက်ပြောက် ငှက်ပြောက် ပြောက်သွားတယ်။ နောက်ပြီး အမေစုကို နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ယူလို့ ဆိုပြီး နိုင်ငံတော်မှာနေလို လလိုထင်ရှားတဲ့လူကြီးတွေကစပြီး တက္ကသိုလ်က ဆရာ ဆရာမတွေကအစ ကုလားမယား ခေါ်ပြီးအပုဒ်ချခဲ့တဲ့လူတွေ – – – ဒို့ ကပြောင်းပြန်တွေးလိုက်တော့ သူတို့ သားသမီးတွေ ကုလားမယားဖြစ်လိုဖြစ်၊ တရားမရုတ် (တရုတ်မယား)
ဖြစ်လိုဖြစ်ကြတော့ – ဟော အခုတော့ စင်္ကပူက တရုတ်မကလေး ပေးကန်းတာကို စားနေရတဲ့ ဗိုလ်ရှုပ်ကြီးတစ်ဦးမက ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မင်းလို ပိတ္တာပြုံးကလေးနဲ့ စပယ်ရာ သိသလားတဲ့ ? ။ ကျနော်လည်း အနှိမ်ခံရတာများလာတာကြောင့် ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ” ခင်ဗျားတို့ ပြောင်းပြန်ကြီးတွေးနေ၊ လှည်းတန်းဈေး အိမ်သာနားက၊ မျှစ်ရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီး – နော်ဆေးဖင် – ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးခေါ်ကြည့်ပါလား ? ၊ တခါထဲထွက်လာပြီး ပါးရိုက်လိမ့်မယ်၊ မယုံရင် လောင်းမလား၊ ” လို့ လောင်းကျေးတင်လိုက်တော့မှ ဘီသုံးလုံးတွေ ရေနွေးကျန်းငုံနေကြလေ ရဲ့ – – –